01 Dry IKhabhinethi
Ikhamera Dry IKhabhinethi
02 Omiswe umshini
Air Blast Omiswe umshini
Vaccum Omiswe umshini
Izinga Lokushisa Eliphezulu umshini
Oshisayo Sterilizer umshini
ophahleni dehumidifier sehlisiwe
Ikhaya Sebenzisa Dehumidifier
04 Izimpahla Safety
05 Ikhaya Zikagesi
06 Lab Izinsiza kusebenza
Njalo Umswakama & Temp Chamber
High & okuphansi Temp Test Chamber
Izidakamizwa Ukuzinza Test Chamber
Electro- Incubator ezishisayo
Hot Yamadivayisi Esibanzi okuzenzakalelayo 1584 Chicken Egg Incubator
Industrial Sebenzisa Industrial Omiswe umshini
160L Water Jacketed laboratory CO2 intengo incubator
4 sigubhu HDPE Spill containment Pallet
Engagqwali Laboratory Umshini umshini nge Pump
Izinga Lokushisa Eliphezulu kanye okuphansi Umswakama Imvelo Test C ...
Umshini Omiswe Izinsiza kusebenza
Engagqwali Laboratory Umshini umshini
133Pa Laboratory Umshini umshini
Izinga lokushisa isixazululo:
± 1 ℃ Laboratory Umshini umshini
Izinga lokushisa ububanzi:
+5 ~ 40 ℃ Laboratory Umshini umshini
2pcs Laboratory Umshini umshini
Ngemva-yokuthengisa Izikhungo Kuncike:
Ayikho isevisi kwezilwandle enikeziwe
50 Piece / Pieces ngamunye Inyanga Laboratory Umshini umshini
Laboratory Umshini umshini Iphakheji: Plywood icala noma lezinyosi ibhokisi iphakethe.
Kuhanjisiwe ezinsukwini ezingu-7 ngemuva kokukhokha
Izinhlobo eziyinhloko Omiswe umshini
Igama lomkhiqizo: Laboratory Umshini umshini nge Pump
Laboratory Umshini umshini Isicelo
imikhiqizo ingilazi umkhakha off the bubble cleaner;
amabhizinisi zezimboni kanye nezimayini, amanyuvesi, ucwaningo lwesayensi futhi laboratories ezahlukene;
izinto ezigciniwe ngaphansi cleaner noma Ceramic, iglu, upende, amathoyizi wepulasitiki, resin yezandla, amakhandlela, iphrinta cartridges.
Laboratory Umshini Izici umshini
Lula design arc baphayona ngu igobolondo kubanda iphuma steel plate spray electrostatic;
Liner zenziwa insimbi engagqwali, semi isiyingi design lesikwele kuwusizo kakhudlwana ukuhlanza;
Yobunzima emnyango chassis ngokuphelele isiqondiso ngokungenasizathu ngumsebenzisi, ukuma jikelele abicah iraba umnyango zamanzi, ukuqinisekisa okusezingeni eliphezulu cleaner ekamelweni;
Isakhiwo kukanxande we studio zendawo, ukuze ivolumu esiphezulu ngempumelelo, ngezicabha steel, ingilazi double umnyango ichashazi-ubufakazi, ukuze izinto ukuqeqeshwa avumela abasebenzisi ukugcina studio shazi.
Laboratory Umshini umshini Specifcation
Igama lomkhiqizo Laboratory Umshini umshini
Laboratory Umshini umshini Shelf 2 Piece
Laboratory Umshini umshini voltage 220V 50HZ
Umshini Ukukala 133Pa
Temperature Ukusebenza + 5-40 ℃
Temp. Control Ibanga RT + 10 ~ 250 ℃
Temp. isixazululo / Temp. ukuguquguquka 0.1 ℃ / ± 1 ℃
Laboratory Umshini umshini engaphandle Material steel , ukushuba njengoba 1.2mm
Laboratory Umshini umshini Ngaphakathi Material SS, thinckness njengoba 3mm
Usayizi engaphandle (mm) 595 * 600 * 1245mm
Made of high steel abandayo iphuma ipuleti, sebeqedile electrostatic powder sishaye, ijazi kunzima liqinile, nokugqwala ukumelana namandla.
I studio ikhwalithi ephezulu insimbi engagqwali ipuleti, round ukuma, abushelelezi, bushelelezi, kulula ukuhlanza.
EzeZindlu studio, ukugcwalisa abahle ingilazi uboya ezishisayo ukwahlukanisa izinto, has okuhle ezishisayo ukwahlukanisa umsebenzi, ukuqinisekisa ngempumelelo ukunemba ukuzinza lokushisa iKhabhinethi ukusetshenziswa imvelo.
Umnyango ukuze double emphemeni ingilazi isakhiwo, indaba ukufuthelana kuhhavini kungabonakala nasemkhakheni ngokucacile, futhi ukushisa ukwahlukanisa umphumela. Ungagwema ngempumelelo ukusha opharetha.
Studio ifakwe ezimelana nokushisa iraba ukubekwa uphawu indandatho phakathi umnyango ingilazi, ukuqinisekisa ukufeza okusezingeni eliphezulu cleaner degree ebhokisini.
Ebusweni elingaphandle heater efakwe odongeni engaphakathi workshop, futhi sithuthukise ukufana izinga lokushisa iKhabhinethi ngangokunokwenzeka, futhi lula igumbi ahlanzekile.
Isiphathi amazinga okushisa ngokushutheka lesi microcomputer ezihlakaniphile ezobuchwepheshe yokukhiqiza, nge zezimboni self kulungiselelwa PID futhi umsebenzi ezine double LED-Windows inkomba, ukulawula izinga lokushisa ngokunemba, anti-Jamming ikhono eqinile, futhi lo msebenzi elula kakhulu.
Laboratory Umshini umshini Akuphoqelekile Izesekeli
RS485 port nokuxhumana
25mm / 50mm / 100mm ikhebula port
Independent nokukhawulela lokushisa isilawuli
inqubo Intellective lokushisa isilawuli
Intellective okucaciswe luketshezi inqubo temperture isilawuli
Laboratory Umshini umshini Imikhiqizo Letihlobene
Laboratory Umshini umshini Impahla & Shipping
Laboratory Umshini Impahla umshini: Plywood noma ukuthekelisa ibhokisi.
Laboratory Umshini Delivery umshini: Phakathi izinsuku ezingu-15.
Njengoba sase elisungulwe ngonyaka 2004 thina njalo sinamathela umqondo "umsebenzi nekhwalithi sokusungula uhlelo kahle. "
Ukuphumelela kwakho ingumthombo yethu. Inkampani yethu ophethe inqubomgomo "izinga lokuqala, abasebenzisi kuqala". Sikwamukela ngokufudumele ukwamukela bonke ekhaya umlingani kanye phesheya ukubambisana nathi.
1. Ingabe ngokwezifiso umkhiqizo?
Yebo, singaya noma ngezifiso noma iyiphi imikhiqizo ngokuvumelana nezimfuneko yekhasimende. Ezinjalo njengoba voltage, ipulaki and eshalofini.
2. Yisiphi kwemibandela yokukhokha eniyenzayo?
PayPal, West Union, T / T, i f Ubeka oda lakho ku-Alibaba, ungakwazi ukukhokha nge-credit card
(100% yokukhokha kusengaphambili.)
3. Yikuphi mpahla iyatholakala?
Ngu ngasolwandle, emoyeni, ngo igcizelela noma njengoba imfuneko sakho.
4. Yiliphi izwe wena akhishwe?
Siye akhishwe emazweni amaningi, zonke kunazo zonke emhlabeni wonke, efana Malaysia, Vietnam, Thailand, United States, eFrance, eSpain, Mexico, Dubai, eJapane, eKorea, eJalimane, Porland Njll
5. eside kangakanani isikhathi kwezidingo?
Zingakapheli izinsuku eziyi-15 zokusebenza.
Previous: lokushisa Lab kanye nomswakama incubator microbiology
Okulandelayo: Hot Yamadivayisi Esibanzi okuzenzakalelayo 1584 Chicken Egg Incubator
Ephathekayo kuArmrest Metal Big Wheel Industrial Deh ...
Speed ​​High Auto Hand nokomisa Encane
Indlu yangasese okuzenzakalelayo Inzwa Electric Hand nokomisa C ...
Quick Omiswe Wall egibele ephathekayo Hand nokomisa f ...
Wall refillable egibele okuzenzakalelayo Soap Idivaysi ekhipha
Izinga Lokushisa Eliphezulu Industrial Laboratory Muffle F ...
Ikheli: 268, South Wangshan Road, Kunshan, Isifundazwe Jiangsu, PRChina
Ifoni: + 86-512-57759270
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi nganoma yisiphi isikhathi futhi senza sizothintana emahoreni angu-24.
UMnu Iculo Jin